အဆိုပါ Phoenix မြို့ဧရိယာအတွက်စားနပ်ရိက္ခာ၏နေအိမ် Delivery
ယူနိုက်တက်စတိတ် အရီဇိုးနား Phoenix မြို့
ဖီးနစ်စားနပ်ရိက္ခာ၏နေအိမ် Delivery Get လုပ်နည်း
အလုပ်များသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးဘဝတွေကိုသူကိုသူတို့အဘို့, တခါတရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုငျသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်အပိုကုန်ကျစရိတ်ကိုကောင်းစွာကျိုးနပ်သည်။ သာ. ကွီးမွတျ Phoenix မြို့ဧရိယာထဲမှာကျနော်တို့အွန်လိုင်းမရွေး, ပြီးတော့ညာဘက်သင့်ရဲ့အိမ်ရှေ့တံခါးသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ဖြစ်ကြောင်းအစားအသောက်ဆိုင်တစ်အိမ်မှာပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းတဲ့စတိုးဆိုင်ရှိသည်ဖို့ကံကောင်းဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ကအရက်ကနေပန်းပွင့်ဖို့, အရာခပ်သိမ်းကိုရောင်းခြင်း, ပုံမှန်ကုန်စုံပစ္စည်းများအပြင်မွေးနေ့ကိတ်မုန့်မှအစားအစာများကိုပြင်ဆင်ကြ၏။ အဘယ်သူသည် Smitty ရဲ့အောက်မေ့? ငါကုန်စုံစတိုးဆိုင်ကိုလည်းကရိယာ, ဂီတ, ပရိဘောဂများနှင့်အဝတ်အစားရောင်းချနိုင်ကြောင်းအံ့သြပဲ! ငါစင်ကြယ်သောအေးမြစတိုးဆိုင်များဆင်းအရောင်အတွက်, ငါ့အပတ်စဉ်ကုန်စုံစျေးဝယ်လုပ်နေတာနှစ်နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖြုန်းတက်လမ်းလျှောက်ဆင်းကျယ်ပြန့်အတန်းမှာပျော်မွေ့လေ့ရှိတယ်။
Times ကပြောင်းလဲပြီ။ ငါ့မိသားစုများအတွက်ကုန်စုံစျေးဝယ်လုပ်ဖို့ - ပေါင်းခရီးသွားအချိန်ပေါင်းဓါတ်ငွေ့ - ငါနေဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်အများစုအတွက်အဆင်ပြေစျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကိုတန်ဖိုးထားနေတုန်းများသောအားဖြင့်အချိန်ကိုဖြုန်းချင်ကြပါဘူး။ အားလုံးပွီးနောကျ, ငါပုံမှန်အား browse ပါဘူး။ ငါမဝယ်ချင်အတိအကျသိကြ၏။
လူတွေကအစားအသောက်ဆိုင်ကယ်နှုတ်ယူဘူးသောအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။ အချို့လူများကရှည်လျားနာရီအလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးစျေးဝယ်ရန်အချိန်ဖြုန်းချင်ကြပါဘူး။ အခြားသူများကစျေးဝယ်စိတ်ဖိစီးမှုစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ကလေးငယ်များရှိသည်။ မောင်းမရသူတွေကိုရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါ, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ရရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ်ရှာဖွေ လွန်းလွန်းပူပြင်းနွေရာသီအတွက် အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
တချို့ကလည်းအများအားဖြင့်ကြောင့်ယာယီဒဏ်ရာသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနာမကျန်းဖြစ်စေရန်, housebound နေကြသည်။ တတိယပုံပြင်လမ်းလျှောက်-up, တိုက်ခန်းရှိသည်နှင့်လှေကားတက်သူတွေကိုမိုးသည်းထန်စွာပစ္စည်းများကိုသယ်ဆောင်ရန်မလိုချင်သလဲ? ဘာပဲအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သင့်အစားအသောက်ဆိုင်၏နေအိမ်ပေးပို့အလားအလာပင်အံ့သြစရာကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒေသအလိုက်, Maricopa အဘိဓါန်ကောင်တီ၏အများဆုံးတလွှား, Safeway ဤဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။
Safeway.com (တိုက်ရိုက် Up ကို Sign) အစားအသောက်ဆိုင်, လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံ, အသားများနှင့်နီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆို Maricopa အဘိဓါန်ကောင်တီအတွင်းတည်ရှိပြီးသင့်အိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ပင်အေးစက်နေတဲ့အစားအစာများကိုရရှိရန်လွယ်ကူစေသည်။ ငါလှည့်ပတ် 20 ခန့်ဇစ် codes တွေကိုစမ်းသပ်ပြီး နေချိုင့် , နှင့်ခရိုင်၏အစွန်အဖျားပေါ်မှာသာအနည်းငယ်ဒေသများ။ ဥပမာအားဖြင့်, Buckeye, Wickenburg နှင့် Gila ကွေးပါဤအချိန် (2016) မှာဝန်ဆောင်မှုမှဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်။
ငါဝန်ဆောင်မှုတက်သည်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့, နှင့်အချိန်ဆိုက်န်းကျင် maneuvering နှင့်မေးခွန်းများကိုအတူဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်၏အတော်လေးနည်းနည်းနေခဲ့ရသည်။ ထိုအခါငါတကယ်အမိန့်တင်လိုက်တယ်။ ဒီနေရာတွင်ကသွားလေ၏ဘယ်လိုဖြစ်တယ်, ဤနေရာတွင်သင် program ကိုအကြောင်းကိုသိသင့်သောအပြစ်တွေ, cons နှင့်အရာဖြစ်ကြ၏။
Safeway.com မူလစာမျက်နှာကုန်စုံ Delivery - အဘယ်သို့ငါလို
တောင်မှအတွက် တော၌နွေရာသီ ကိုသင်အအေးခန်းသို့မဟုတ်အေးခဲပစ္စည်းများစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ အပူထဲမှာမကောင်းတဲ့ကိုသွား ။
1-နာရီ,2နာရီသို့မဟုတ် 4-နာရီ: သင်ကွဲပြားခြားနားသောပို့ဆောင်မှုပြတင်းပေါက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သငျသညျ Safeway, အောက်ပိုင်းပေးပို့တာဝန်ခံကိုပေးနိုင်ပါသည်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ Delivery တာဝန်ခံအလို့ငှာနှုန်း $ 9,95 ကနေ $ 12,95 မှကွဲပြား, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသင်တဲ့ 4-နာရီပေးပို့ဝင်းဒိုးကိုပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သငျသညျသငျတို့ရှေ့တစျခုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါလျှင်ပင် Safeway ကလပ်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူကမ်းလှမ်းဈေးလျှော့ခံယူနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းအပိုဆောင်းအထူးလျှော့စျေးကိုလက်ခံရရှိရန်အ Just4U အစီအစဉ်အတွက် sign up ကိုပေးနိုင်သည်။
တိုင်းကို item ကိုသင်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုအာဟာရအချက်အလက်တွေကိုမြင်တွေ့ဖို့ကိုနှိပ်ပါနိုင်သောနေရာကအောက်မှာ link တစ်ခုရှိပါတယ်။
ကလပ်ကဒ်အထူးလျှော့စျေးမှတ်ချက်ချကြသည်, သင်ကလပ် Card ကိုအထူးလျှော့စျေးရှိသည်သောသူတို့အားပစ္စည်းစာရင်းကိုကြည့်ရှုသို့မဟုတ်တစ်ခုမှာတစ်ခုမှာ Specials Get Buy နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျပစ္စည်းအကြောင်းကိုအွန်လိုင်းအမိန့်များအတွက်မှတ်ချက်တင်သွင်းလိမ့်မည်။ ငါအသီးအနှံပစ္စည်းများကိုအဘို့ဤအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်ရှာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါငှက်ပျောသီးအမိန့်, ငါကသူတို့ကိုအနည်းငယ်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ချင်ပါတယ်တဲ့မှတ်စုတင်ခဲ့သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအပျေါမှာ, သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်ထားသည့် item ကိုအဲဒီအချိန်ကမရရှိနိုင်လျှင်အလားတူပစ္စည်းကိုအစားထိုးစေခြင်းငှါဖြစ်စေမ, တစ်ဦးချင်းစီကို item အဘို့, ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်ရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်းများနှင့်အနီးစပ်ဆုံးဈေးနှုန်းစာရင်းပြုစုကြောင်းကိုသင်၏အမိန့်တစ်ခုကအီးမေးလ်အတည်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ အသီးအနှံသို့မဟုတ် Just4U ရောင်းချပစ္စည်းများကဲ့သို့အခြို့သောပစ္စည်းများ, နောက်ဆုံးတာလီချိုးအပေါ်ကွဲပြားခြားနားတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။
ဖြန့်ဝေအပျေါမှာ, သင် (သင်ဘို့ခွင့်ပြုလျှင်) အစားထိုးခဲ့ကိုမဆိုပစ္စည်းအကြံပေး, သို့မဟုတ် (အဘယ်သူမျှမအစားထိုးခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်လျှင်) ကိုမရရှိနိုင်ခဲ့မည်သည့်ပစ္စည်းများပါလိမ့်မည်။ သငျသညျအမိန့်အဘို့အလက်မှတ်ထိုးရန်ဟုမေးပါလိမ့်မည်။
သင်စွဲချက်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများကိုအမိန့်သို့မဟုတ်ရှိသည်ပစ္စည်းများနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှကိုရှာဖွေလျှင်, သင် 1-877-505-4040 မှာနံနက်9နှင့် 10 နာရီအကြားထိုရက်သတ္တပတ်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုခေါ်နိုင်ပါတယ် ဒေသစံတော်ချိန် ။ ငါမြန်နှုန်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှာသူတို့ကိုရှိသည်! သင်တို့သည်လည်း app ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင် store မှာဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဖြစ်သင်အွန်လိုင်းအမိန့်များအတွက်တူညီဆုလာဘ် (ဥပမာဓာတ်ငွေ့ဆုလာဘ်,) လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
Safeway.com မူလစာမျက်နှာကုန်စုံ Delivery - သတိပြုပါ
မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နှေးကွေးနေသေးတယ်နိုင်ပါတယ်။ ငါပြီးသားတစ်ဦး Safeway ကတ်ခဲ့ကတည်းကဒါဟာစကားဝှက်တွေနဲ့လင့်ခ်အကောင့်ကို reset ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူစနစ်သို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရဖို့ငါ့ကိုအချိန်အတော်လေးနည်းနည်းယူပေမယ့်ကျွန်မရဲ့ကဒ်အရေအတွက်ကဘာမသိခဲ့ပါ (အစဉ်မပြတ်ငါ In-store ကိုငါ့အဖုန်းနံပါတ်အသုံးပြုသော) ။ အလွန်အင်တာနက်ကိုနားလည်တဲ့မဟုတ်လူတို့အဘို့, ကလွယ်ကူမဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်မဝယ်သောသူအချို့ထုတ်ကုန်အိမ်ပေးပို့အစီအစဉ်ကိုအောက်မှာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါသည်ငါ့ဧရိယာအတွင်းရှိ Safeway မြေတပြင်လုံးသည်ကိုသင်တို့သိ, ရောင်းရန်ရှိသည်လှော်ကြက်ကိုပြင်ဆင်ပေမယ့်ထုတ်ကုန်အိမ်မှာပေးပို့ဘို့မရရှိနိုင်။ ထိုနည်းတူစွာငါကိုသုံးပါသောမုန့်များ၏အမှတ်တံဆိပ်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်များအတွက်မရရှိနိုင်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်သော်လည်းငါ့ဒေသခံ Safeway ကသယ်ဆောင်။
စျေးနှုန်းများတူညီမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခါတလေအတော်လေးကြီးမားတဲ့ margin က, Safeway.com မှာအချို့ပစ္စည်းများကိုပိုမိုမြင့်မားတိုးမှာထက်စျေးနှုန်းခဲ့သတိပြုမိသည်။
တစ်ဦး $ 50 နိမ့်ဆုံးအမိန့်လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့စျေးဝယ်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, သင်သည်လည်းပူဇော်ရအံ့သောငှါအသစ်သောထုတ်ကုန်ကြည့်ရှုရန်အတန်းမှာ browse နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ (အဘယျနညျးသူတို့ကယခုအိုးတလုံးထဲမှာပန်းသီးပိုင်ရောင်းချ? သိပ်ဟုတ်! ရဲ့ကကြိုးစားပြီးကြပါစို့!)
ငါခန့်မှန်းစျေးနှုန်းအဖြစ်ကိုးကားဘာနဲ့ငါ့မူရင်းအီးမေးလ်ကစာရင်းပြန်လည်သင့်မြတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသော်လည်း, နောက်ဆုံးလက်ခံရရှိအသေးစားချိန်ညှိ (အလေးချိန်အားဖြင့်ရောင်းချခဲ့သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ) နှင့်အတူမှန်ကန်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ လူအများစုဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အီးမေးလ်ပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ကြိုးစားမည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကနားလည်ရန်ကြိုက်ခဲ့သည်လိမ့်မယ်။
Next ကို 's Page >> ဆယ်ပါးသောအရာ Safeway.com ကုန်စုံမူလစာမျက်နှာ Delivery Service ကိုအကြောင်းသိပါစေရန်
အားလုံးရက်စွဲများ, အချိန်များစျေးနှုန်းများနှင့်ပူဇော်သက္ကာများကိုဤနေရာတွင် notice.Comments မရှိဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်များမှာ 2013 ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းဝန်ဆောင်မှုနဲ့ငါ့အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံထားတယ်။
ငါဝန်ဆောင်မှုသုတေသနပြုအချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့, ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကြောင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကယ်တင်နဲ့ကျွန်မ Safeway.com မှတဆင့်အွန်လိုင်းအစားအသောက်ဆိုင်ဝယ်ယူအကြောင်းကိုသိရန်အရေးကြီးဆုံးသောအရာတို့ကိုဖြစ်ယုံကြည်သင်သည်အဘယ်သို့ပြောပြလိမ့်မယ်။
မူလစာမျက်နှာစားနပ်ရိက္ခာ Delivery များအတွက် Safeway.com အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းသိထားမှဆယ်ပါးပိုအရာ
Safeway.com ဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်မရှိတာဝန်ခံရှိပါသည်။ သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်တခုကိုသင်နိုင်ရန်နေရာရသောအခါတရားစွဲဆိုထားသည်။
သငျသညျ Safeway.com မှာအမိန့်ကိုနေရာချပါလျှင် (တိုက်ရိုက် Up ကို Sign) သင့်ပေးပို့တာဝန်ခံသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအမိန့်အဘို့အသက်ညှာပါလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းသက်ဆိုင်ပဲ! သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးအွန်လိုင်းအလို့ငှာလက်မှတ်ထိုးဖို့သောအခါရုံကုန်ပစ္စည်းမှာပရိုမိုရှင်းကုဒ် EASY7 ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါကညာဘက်ရဲ့ - အစဉ်အဆက်ကိုထပ်မိန့်မှမပါစာချုပ်သို့မဟုတ်တာဝန်နှင့်သင်၏ပထမဦးဆုံးမိန့်အခမဲ့နေအိမ်ပေးပို့။ သင်တို့သည်လည်းယခုသင်မှတ်ပုံတင်ဖြစ်ကြောင်းအီးမေးလ်ဖြင့်ပရိုမိုးရှင်းသို့မဟုတ်အထူးခံယူပေလိမ့်မည်။
ခုနှစ်တွင် Maricopa အဘိဓါန်ကောင်တီ အားလုံးနီးပါးဒေသများ Safeway ရဲ့ပေးပို့ဧရိယာထဲမှာထည့်သွင်းထားပါသည်။ Phoenix မြို့, Scottsdale, Temp, Chandler, လင်းဒေးလ် Peoria, အံ့အားသင့်စရာ, ဂူ Creek အဘိဓါန်နှင့်ပိုပြီး။ တောင်မှဘုရင်မ Creek အဘိဓါန်များနှင့်နိုင်ငံတော်သီချင်းနေထိုင်သူများန်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။
သငျသညျ Safeway.com အိမ်မှာပေးပို့ဘို့ sign up ကိုဘယ်အချိန်မှာသင်မှတ်ပုံတင်ရန်အချိန်ကသင်၏ကလပ်ကဒ်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ဘဲနေလျှင်, သင်အလိုအလျောက် Safeway ကလပ်ကဒ်တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ သငျသညျမှတျပုံတငျ, နှင့်သင်ပြီးသားတစ်ဦး Safeway ကလပ်ကဒ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, ငါဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကလူကိုခေါ်သူတို့ကိုစတိုးဆိုင်စနစ်အသစ်ရဲ့ကဒ်အရေအတွက်ကလင့်ထားသည်နှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာ Just4U ဈေးလျှော့ဘို့သင့်ကို sign up ကိုရှိချင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်။ ရသည်မှာသူတို့နှစ်ဦးကိုသီးခြားစနစ်များရှိသည်နှင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အတူတကွချိတ်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်။
သငျသညျ Safeway အွန်လိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုတဆင့်ရောင်းချသည်ဟုအရာအားလုံးအမိန့်မပေးနိုငျသညျ။ ဥပမာအားဖြင့်, ပြင်ဆင်ထားအစားအစာများ, ပန်းများ, စီးကရက်, လက်ဆောင်ကတ်များသို့မဟုတ်ထီလက်မှတ်တွေ Safeway.com မှတဆင့်ဝယ်ယူမရရှိနိုင်ကြသည်။ သငျသညျသူတို့အဘို့စတိုးဆိုင်ကိုသွားရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်။
သငျသညျခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်အားဖြင့်ပေးဆောင်နိုင်တော့မည်ရန်ရှိသည်။ အဆိုပါပေးပို့လူတွေဆိုပိုက်ဆံစုဆောင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ချေးကြပါဘူး။ ရှိသမျှသောအွန်လိုင်းပြုမိရဲ့။
သငျသညျ Safeway.com ဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်အစားအသောက်ဆိုင်တခြားနေရာကိုအပ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ mom, အပ်ခံရဖို့အစားအသောက်ဆိုင်အမိန့်ချင်ပေလိမ့်မည်, သို့မဟုတ်သင်အလုပ်ကိုမှာရှိနေစဉ်သင်အစားအသောက်ဆိုင်သည်သင်ကိုအပ်ချင်ပေလိမ့်မည်။
သင့်အွန်လိုင်းအလို့ငှာအပြီးသတ်ရုံရှေ့မှာသင့်မှတ်ချက်ရေးသားနိုငျသညျ။ ငါ GPS စနစ်ငါ့အိမ်ကိုမမှန်ကန်ကြောင်းသိသောကြောင့်ငါလမ်းညွန်မှဆွေမျိုးတိကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုပေး၏။ အကြှနျုပျ၏ကားမောင်းသူအဆောက်အဦနံပါတ်များကိုမကြာခဏတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲဘယ်မှာကြီးမားသောတိုက်ခန်းရှုပ်ထွေးသောတှငျနထေိုငျသောလူ, တိုက်ခန်းတည်ဆောက်ခြင်းတှငျအဘယျအကွောငျးကိုအတိအကျပေးလျှင်သူကကိုအလွန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ ဥပမာ, တိုက်ခန်း access ကိုအနီးကပ်ဆုံးသောမှတ်ချက်ရေးသားခြင်း အရေအတွက်က 326, ဒါမှမဟုတ်အဆောက်အဦးရေကန်ရဲ့နောက်ကွယ်ကရှုပ်ထွေးသော၏အရှေ့မြောက်ထောင့်တွင်တည်ရှိသည်ကားပါကင်အစက်အပြောက်ဖို့, ကားမောင်းသူအချိန်ပေါ်ဖြစ်ကူညီပေးပါမည်။ အလားတူပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိပ်စာများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိကျတဲ့မှတ်ချက်များလုပ်ငန်းစဉ်လွယ်ကူချောမွေ့လိမ့်မယ်။
သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင်ရဲ့နေရာမှာသင်ကပေးပို့သင့်ရဲ့အစားအသောက်ဆိုင်ရှိပါကသင်ပေးပို့ဝင်းဒိုးကိုအချိန်အလုပ်မှာနှင့်သင်အိမ်မှာသူတို့ကိုယူသည်အထိသင်သည်မည်သည့်ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်အေးစက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုသိုလှောင်ရန်နေရာရှိသည်ကြောင်းကိုသင်၏အချိန်ဇယားကိုက်ညီသောသေချာစေရန်ရှိသည်။ ဒါကညာဘက်, သိသာလား
Safeway.com ယာဉ်မောင်းသင်အွန်လိုင်းသူတို့အဘို့အပေးဆောင်သော်လည်းသင့်ရဲ့အိမ်တံခါးမှာအစားအသောက်ဆိုင်စွန့်ခွာမည်မဟုတ်။ သင်သည်မည်သည့်ယမကာအမိန့်ထုတ်လျှင်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ရှိသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကထိုသူတို့အဘို့ 21 သို့မဟုတ်အထက်လက်မှတ်ထိုးရန်ရှိနိုင်ပါရှိရပါမည်။
နှစ်ကြိမ်ဘယ်တော့မှအတူတူပင်တဦးတည်း - - ငါသည်ငါ့မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေရဖို့ကိုငါးကြိမ် ပတ်သက်. ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုလိုင်းဟုခေါ်တွင်ခြင်း, လူတစ်ဦးချင်းစီ, ယဉ်ကျေးသာယာနှင့်အထောကျအကူပွုခဲ့သညျ။ သူတို့ကနားလည်ရန်လွယ်ကူသောခဲ့ကြသည်နှင့်အပင်အထောက်အကူဖြစ်စေအကြံပြုချက်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အဆိုပါယာဉ်မောင်း / ပို့ဆောင်မှုလူတစ်ဦးချိန်းချက်သောပြတင်းပေါက်အတွင်းကောင်းစွာရောက်လေ၏။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, အလယ်၌တရား။ သူကသင့်ရဲ့တိုက်ခန်းကိုရောက်ဖို့လှေကားပျံသန်းမှုအစားအသောက်ဆိုင်ဖွင့်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ သူကကျွန်မကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏မီးဖိုချောင်သို့ငါ၏အအစားအသောက်ဆိုင်သိမ်းသွား၏။ ငါကားမောင်းသူသင့်အိမ်အတွင်းအပြင်လှေကားသည့်အစားအသောက်ဆိုင်ဖွင့်သယ်ဆောင်ရန်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးမိန့်အတော်လေးခဏတစ် ယူ. နည်းနည်းရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။ ဒါဟာတစ်ဝှမ်းဒုတိယအကြိမ်တွေအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပဲ!
ငါသိတယ်ငါသိတယ်။ ဒါကသင်သိသင့်ပါတယ်တစ်ဆယ်အရာငါ၏အစာရင်းတွင် 13 ပစ္စည်းများပဲ!
သငျသညျတခြားနေရာအရီဇိုးနားမှာနေထိုင်ပေမယ့်အနီးအနားမှာနေတဲ့ Safeway စတိုးဆိုင်ရှိပါက, သင်သည်ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မှတ်ပုံတင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏ဇစ်ကုဒ်ကြိုးစားပါ။ ဒီဝန်ဆောင်မှုအရီဇိုးနားအပြင်ဘက်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်: ကိုလံဘီယာ, မေရီလန်းပြည်နယ်, အော်ရီဂွန်, ဗာဂျီးနီးယားနှင့်ဝါရှင်တန်၏ကယ်လီဖိုးနီးယား, ခရိုင်။ Maricopa အဘိဓါန်ကောင်တီ၏အပြင်ဘက်တွင်တစ်လောင်စာဝန်ပိုသို့မဟုတ်အပိုဆောင်းဖြန့်ဝေစွဲချက်ရှိပေမည်။
ယခင်စာမျက်နှာအကောင်းအဆိုး cons နှင့်အတူ >> ဘယ်လို Safeway.com ကုန်စုံမူလစာမျက်နှာ Delivery Works,
ဖီးနစ်ဆငျဖိုနီခန်းမ Map နှင့်လမ်းညွှန်ချက်များ
Litchfield ပန်းခြံ: အ Park က 2016 ခုနှစ်ခရစ္စမတ်
Scottsdale, အရီဇိုးနားအတွက်လမ်းစားဟင်းလျာများ 2017
Phoenix မြို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Raceway မြေပုံ
2016/2017 - တရှင်သန်နေသောခရစ္စမတ်သစ်ပင်လှူဒါန်းနိုင်ရန်မည်သို့
အဆိုပါ Reno / တာဟိုးဒေသကြီးအတွက်ရာသီအလိုက်တုပ်ကွေး Shots ရယူခြင်း
Rose.Rabbit.Lie ဆိုတာဘာလဲ။ နာမည်ကျော်ဟိုတယ်၌ Las Vegas မှ
ပွဲတော်ကြီးအခမ်းအနားကျင်းပရန် (Cologne အပြင်) ဂျာမန်မြို့များ
အဆိုပါ Mega လိုဏ်ဂူသမိုင်းဝင်ဓါတ်ရထားခရီးစဉ်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
အကြီးမားဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးမီးပန်း Tacoma အနီးဖော်ပြပေး
Kalahari Sandusky အကောင်းဆုံးအမေရိကန်မိုးလုံလေလုံရေပန်းခြံများထဲတွင် Is
Central America မှာ Scuba ရေငုပ်: ထိပ်တန်းထိုးဆင်းခရီးဆုံးများအာလုံး
ကမ္ဘာ့ဖလားခန့် Soarin '' ဒစ္စနေးရဲ့အကောင်းဆုံးစီးနင်းတစ်ခုမှာ Is
Newberry အမျိုးသားမီးတောင် Monument